Pp Loven kitapo, Pp Rice Bag, Pp Loven Fibc Bag - Jintang Packaging
Voafaoka soa aman-tsara izahay teo amin'ireo mpanamboatra ambony indrindra, mpanondrana ary mpamatsy kitapo BOPP Rice. Ireo kitapo ireo dia namboarina tamin'ny fampiasana akora manta ambony indrindra (100% PP vaovao) ary ny teknolojia saro-pady. Ireo kitapo natolotra dia ampiasaina hanosehana masom-bary ary katsahana eran'izao tontolo izao. Ny mpanjifanay dia afaka mahazo ireo kitapo ireo aminay amin'ny loko sy habe maro samihafa amin'ny 5 ka hatramin'ny 75 kilao araka ny fomban'izy ireo manokana. Izahay dia manolotra ireto BOPP Rice Bags amin'ny famolavolana marika amin'ny vidin'ny ekonomika indrindra amin'ny mpanjifa.
AD * STAR® no foto-kevitra gony fanta-daza ho an'ny vovon-dronono - ampiasaina eran'izao tontolo izao, nohodidinina erak'izao tontolo izao, ary namokatra manokana amin'ny milina Starlinger. Ny gony vita amin'ny PP vita biriky, novolavolaina tsy misy adhesive amin'ny alàlan'ny famoahana hafanana ny takelaka amin'ny lamba, dia novolavolaina tamin'ny famenoana feno sy famaritana automatique ao an-tsaina. Vokatry ny toetran'ny akora sy ny fizotran'ny famokarana manokana, ny lanjan'ny lanjan'ny 50 kg AD * STAR® simenitra simenitra dia mety ho ambany 75 grama. Kitapom-takelaka vita amin'ny sosona 3 sosona dia milanja tokony ho 180 grama sy kitapo PE-film 150 grama. Ny fampiasana ara-toekarena akora manta dia tsy vitan'ny manamaivana ny vidiny fa ilaina ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Boda dia iray amin'ireo mpanamboatra sy famatsiana karazan'entana FIBC marika sakafo miaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena madio, kojakoja ilaina indrindra, laboratoara fanaraha-maso tsara kalitao, mpiasa manana traikefa ary manam-pahaizana manokana, ary ekena polimerim-pianarana tsara indrindra sy fitaovana hafa fanampiny .
Orinasa indostrialy lehibe namokatra kitapo vita amin'ny fonosana avo lenta any North China isika.Misy orinasa roa, ny vokatra isan-taona dia mihoatra ny 100 tapitrisa dolara. Raisinay an-tsitrapo ny mpanjifa rehetra ao amin'ny orinasantsika amin'ny fifanarahana.
Fameperana, fampisehoana ary fahatokisana
Avy amin'ny kitapom-baravarana ambany Bot ka hatramin'ny lamba tenona ho an'ny PP, ny fitaovana azontsika ampidirintsika dia afaka manome ny vokatra miaraka amin'ny kalitao tsy manan-tsahala ao anatin'ny fangatahana hahavoa ny mpanjifa.Mifandraisa amin'ny manam-pahaizana manokana
Team Sales 1
Boss sy ny ekipany
Mpitarika ny goverment
Famokarana baoritra simenitra
Orinasa Top 20 amin'ny Indostria plastika
Milina Ad Star
Shijiazhuang Boda Plastika Chemical Co, Ltd dia naorina tamin'ny 2003, ary manana orinasa mitana ny fananana manontolo antsoina hoe Hebei Shengshi Jintang Packaging Co., Ltd. Manana orinasa telo izahay, ny orinasa voalohany eto aminay dia manana orinasa 30000. metatra toradroa ary mpiasa 300 mahery miasa ao. Ny orinasa faharoa misy ao Xingtang, tanàna ivelan'ny tanànan'i Shijiazhuang. Nomena anarana Shengshijintang Packaging Co., ltd. Mihoatra ny 45.000 metatra tora-droa ary manodidina ny 300 ny mpiasa miasa ao. Ny orinasa fahatelo Fitoerana maherin'ny 85000 metatra toradroa ary manodidina ny 300 mpiasa miasa ao no vokatra vokarin'ny hafanana
Our Factory Fiantohana kalitao toekarena
Ny tombotsoantsika 01
Haben'ny orinasa (Sq.meters)
Manana orinasa telo izahay, ny voalohany dia faritra 30000 metatra tora-droa, ny faharoa dia velarantany 45,000 metatra toradroa, ary ny fahatelo dia mameno velarana 85,000 metatra toradroa. Mifandraisa aminay
Ny tombotsoantsika 02
Manana fitaovana mandroso maro isika avy amin'ny fanafoanana ny fonosana. Manana fitaovana fitsapana kalitao tonga lafatra izahay mba hahazoana antoka fa ny kalitaon'ny vokatra dia mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.Mifandraisa aminay
Ny tombotsoantsika 03
Boky varotra isan-taona (an-tapitrisany dolara amerikana): 10 tapitrisa dolara amerikana - 50 tapitrisa dolara isan-taona fividianana amerikana (tapitrisa dolara amerikana): 2 tapitrisa dolara amerikana - 5 tapitrisa dolara amerikana. Mifandraisa aminay
Sakano ny kitapo ambaratonga ambany, Sakanana ny fonosana mofom-bary vary ambany any ambany, Kitapom-tsakafo an-tsakafo Bour Laminated, Manakana ny kitapo fanamboarana simenitra vita ambany, Pp Cement Block Bottle Valve Bag, Sakano ny kitapo fonosana flour ambany fantsom-baravarana ambany, Olana rehetra